Faahfaahin ka soo Baxaya Shil Gaari oo Ka Dhacay Dowlad-Deegaanka Soomaalida ee Itoobiya | Radio Balcad
Home WARARKA MAANTA Faahfaahin ka soo Baxaya Shil Gaari oo Ka Dhacay Dowlad-Deegaanka Soomaalida ee...
Shil Gaari ayaa waxaa uu ka dhacay Wadada u dhaxeeysa Magaalooyinka Babile iyo Jigjiga ee Dowlad Degaanka Soomaalida, Shilkaasi ayaa waxa uu sababay iney Geeriyoodeen 4 Ruux iyo dhawaaca 2 kale, kuwaas oo gaariga saarnaa Xiliga uu Shilka Gaari uu dhacayey.
Shilka ayaa yimid, kadib markii uu rogmaday Gaari yar oo Dowlad Degaanka Soomaalida looga yaqano hardtop , kaas oo sida la sheegay ka yimid Magalada Fiiq Ee Gobolka Erar,waxaana uu ku wajahnaa Magaalada Jigjiga ee Xarunta Dowlad Degaanka Soomaalida.
Dadka Shilka ku geeriyooday ayaa goobjoogayaal waxaa ay sheegeen inay kala yihiin, Sheekh Maxamed Cabdullaahi oo Caan ka ahaa degaannada Dowlad degaanka marna kasoo Shaqeeyay Maxkamadda Shareecada ee gobolka Erar, laba Haween ah lagu kala Magacaabi jiray Faadumo Khaliif iyo Ruqiyo Maxamed iyo Darawalkii Gaariga.
Shilka Gaari ayaa waxaa dadka ku dhaawacmay kamid ah Hooyo heysata 7 Caruur ah oo Magaceeda lagu soo koobay Nimco oo la sheegay inay tahay Xaaska Sheekh Maxamed Cabdullaahi oo shilka ku geeriyooday iyo qof kale.
Ciidamo ka tirsan kuwa Liyuu Boolis ee dowlad degaanka Soomaalida Itoobiya iyo dad Shacabka ahaa ayaa tegay halka uu shilka uu ka dhacay, kuwaas oo goobta ka soo qaaday meydadka iyo dadka shilka ku dhaawacmay.
Wadada u dhaxeeysa Magaalooyinka Babile iyo Jijiga ee dowlad degaanka Soomaalida ayaa waxaa kusoo batay Shilalka Gaari, waxaa labadii Bishii May ee sanadkaan Shil gaari oo ka dhacay ku geeriyooday laba ruux halka tiro intaasi ka badan ay ku dhaawacmeen.
Previous articleDagaal Sababay Dhimasho iyo Dhaawac oo ka dhacay Gobaladda Hiiraan Iyo Galgaduud
Next articleKiisaska Dadka qaba Coronaviruska ee dunida oo kor u dhaafay 30 milyan
Banaanbax Looga Soo Horjeeday Farankiiska Oo Ka Dhacay Somaliland
Tirada dadka Soomaalida ee uu ku dhacayo Covid-19 oo kordhaya
Faahfaahin dilal iyo Qarax ka dhacay Kaxda
DEG DEG: Xildhibaano ka Tirsan Baarlamaanka oo mooshin culus u...
Golaha Wasiirada Puntland oo Caawa yeeshay kulan xasaasi ah